FAQ - Ningbo Everfine Plastics Co., Ltd
Cutlery, sezipuni Kits
Izinkomishi, tekuphatsa, Plates, Bowls
Amagilavu ​​& Ukufika okusha
amanani ethu angaphansi izinguquko eziphathelene eluhlaza izindleko impahla kanye nezinye izinto emakethe. Sizokuthumelela i Uhla lwamanani olusha emva inkampani yakho uxhumane nathi ukuze uthole olunye ulwazi
Yebo, sidinga njalo ukuze worths okungenani $ 1000, kanye nobungako ngayinye into kuze kube 100,000pcs.
KUNJALO. Sine R eqinile & D Ithimba, imikhiqizo kungaba oklanywe ngokukhethekile ukuze ivumelane izidingo zakho siqu.
Yikuphi izinkampani kukhona / amakhasimende akho ezinkulu ngobukhulu ezweni lakithi / regiorr?
Sine impela eningi amakhasimende emhlabeni wonke, kodwa asikwazi okwengeziwe ulwazi lwabo oluyimfihlo.
Maqondana nezibonelo, phambili isikhathi imayelana ezingu-7. Ukuze nokukhiqizwa kwezinto ngobuningi, phambili isikhathi izinsuku ezingu 20-30 ngemva kokwamukela inkokhelo idiphozi. Izikhathi phambili lizoba ngempumelelo uma (1) sesamukele imali yakho, futhi (2) siyamukeleka yakho yokugcina ye-isampula izinga & wobuciko design.In zonke izimo sizozama ukufanisa izidingo zakho. Ezimweni eziningi esikwazi ukwenza kanjalo.
T / T. 30% idiphozi kusengaphambili, 70% esele ngokumelene ikhophi B / L.
D / P emehlweni (imibhalo ngokumelene emehlweni lokukhokha).
O / A izinsuku ezingu-60 (i-akhawunti evulekile) e kangcono amakhasimende ezinokwethenjelwa kunazo.
We ekuqinisekisa ukuthi zonke izimpahla ezisetshenziselwa amapulasitiki ukucutshungulwa kanye emaphaketheni kukhona ukudla grade. Njengoba BSCI, Sedex wacela ilungu, BRC, GMP, IS022000, HACCP ifektri eqinisekisiwe, sisuke committedto lokuveza imikhiqizo izinga, Okwamanje ekhuluma futhi ekuxazululeni zonke udaba izinga eyicela.
Ingabe isiqinisekiso isikhunta amakhasimende iphephile futhi ivikelekile 'etshaliwe?
Uma kukhona amakhasimende ukutshala isikhunta, sizohlonipha futhi bavikele izithakazelo zabo lokubalulekile IPR (Intellectual Property Rights), isikhunta okukhethekile yabo ongasoze sisetshenzisiwe kwenye indawo oda nomunye.
Ukuze isampula-ukuzithoba, lokuthumela Imali ziyahlukahluka kusuka $ 40 $ 80.
Ukuze LCL futhi FCL imithwalo, lokuthumela Imali kuxhomeke INCOTERMS ngayingcwelisa forwarders.
Thina uzohambela 122th Canton Fair